I-40 YEWAVE BEST HAIRCUTS YAMADODA AMNYAMA (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda Eyona ndawo ilungileyo yokuLungisa iinwele
Amaza okucheba iinwele sisinwele esipholileyo nesinefashoni yamadoda amnyama. Ukucoceka nokucoceka okucocekileyo, uninzi lwabafana lukhetha ukufumana ukudamba ngamaza, kodwa kukho inani le…
Amaza okucheba iinwele sisinwele esipholileyo nesinefashoni yamadoda amnyama. Ukucoceka nokucoceka okucocekileyo, uninzi lwabafana lukhetha ukufumana ukutshabalala ngamaza, kodwa kukho inani leentlobo ezahlukeneyo zokucheba amaza ukuzama. Eyaziwa nangokuthi ngamaza angama-360 okanye ubude bokunqunyulwa kweenwele, le iinwele zimfutshane ziqala ngesantya, ezantsi, phakathi, phezulu, ukuhla, okanye i-bald taper fade emacaleni nasemva. I-buzz enqunywe ngaphezulu inyibilikisiwe, igcotywe, kwaye igutyungelwe ngesigqubuthelo (durag) ukwenza amaza anzulu.
Ukukhuthaza ukusikwa kwakho okulandelayo, nanga awona manzi mhle okucheba iinwele ukuze ufumane ngoku. Nokuba ufuna amaza angama-360 okanye ali-180 ngenxalenye, uyilo, ulayini okanye iindevu, ezi ndlela zangoku zokucheba iinwele ziya kukubonisa zonke iindlela ezahlukeneyo zokunxiba oku kunqunyulwa.
1Ukuphela kweyona mibala mihle
1.1Ukuphela kwetempile ngamaLungu
1.2Ulahle iphele ngamaza
1.3Ukuphela okuphantsi ngamaza
1.4I-Mid Fade ngamaWave
1.5Ukuphela okuphezulu ngamaza
1.6I-Bald Fade ngamaza
1.7Taper iphela ngamaza
MbiniIinwele ezingama-360 zeenwele
2.1Amaza anzulu angama-360
2.2Amaza angama-360 aneCandelo
2.3I-360 Waves haircut kunye noyilo
3Iinwele eziyi-180 zeeNwele
3.1Amaza ayi-180 ayaphela
3.2Amaza ali-180 ayiliwe
4Amaza apholileyo eenwele
4.3Isiqingatha seNyanga sokucheba iinwele
4.4Amakhwenkwe aMnyama ngaMaza
4.5Amaza ane Line Up
Ukuphela kweyona mibala mihle
Ukuphela kwamaza lolona hlobo luthandwayo lokujonga. I-taper fade haircut emacaleni nasemqolo ibonelela ngesitayile sokuchasana okuphezulu esigxile emehlweni kwizinwele zamaza ngaphezulu.
Zininzi iintlobo zokucheba kweenwele ezahlukeneyo ezinamaza. Thetha kwi-barber yakho malunga neyona nto ifanelekileyo yamadoda ukuzama nge-haircut yakho ye-wavevel. Ukukunceda ukuba ube nombono wokusika kunye nezitayile, jonga ezi taper zipholileyo ziyaphela kumaza angama-360.
Ukuphela kwetempile ngamaLungu
Ukuphela kwetempsi ngamaza kukufumanela iinwele ezimdaka, zala maxesha. Amadoda amnyama ayayithanda ukuphela kwetempile iinwele kuba iqala phezulu kufutshane nenwele kwaye ibonelela ngemigca ebukhali, ecekeceke yokujonga okungathandekiyo.
I-Bold kunye ne-stylish, ukusika kuya kuncedisa ngokwenene i-buzz yakho emfutshane. Yongeza iindevu okanye uyilo kwitempile ebunayo kunye nesimbo sama-360 okanye ama-180 amaza okugqibezela.
Ulahle iphele ngamaza
Idrophu iphela ngamaza yenye yeendlela ezithandwayo zamadoda amnyama ukufumana le nwele. A ukulahla ukuphela sisinqumleli esifutshane emacaleni nasemqolo ejikeleze indlebe kwaye yehle iye kufikelela entanyeni kwisiphelo esikhethekileyo.
Njengezinye iintlobo zokuphela, ukwehla kokuphela kokucheba iinwele zamaza kunokuthanjiswa okuphezulu okanye okuphantsi kwaye kuhlanganiswe eluswini kunqunyulwe i-bald. Ukujongeka kweklasikhi, khetha udidi olusezantsi lokugqibela ngamaza akho. Nokuba yeyiphi na indlela, la maqhekeza aphelayo amaza okusika aya kuhlala ehamba.
Ukuphela okuphantsi ngamaza
Ukuphela okuncinci ngamaza kunokujongeka kupholile kwaye kuklasi, ngakumbi xa uthatha isigqibo sokwenza amaza anzulu angama-360 ngeenxa zonke. Inkqubo ye- I-taper ephantsi iphela iqala ngentla kwendlebe kwaye yehle iye kwi-neckline, iyenze ilungele amadoda amnyama aqeqeshiweyo.
Eguqukayo kwaye intle, iinwele eziphantsi zokucheba kulula ukuzifumana kunye nesitayile. Yongeza iindevu, inxenye, okanye ulusu luphele kumaza akho angama-360 okanye ali-180 ngenkangeleko entle.
I-Mid Fade ngamaWave
Ukuphela kwamaza phakathi kwamaza kunikezela ngeenwele ezimfutshane emacaleni nasemva okujongeka kushushu kwindalo iphela kwaye kuyindoda. Abafana banokucela i ophakathi okanye ulusu luphele kuxhomekeka ekubeni bafuna ukuya kufutshane kangakanani.
Ngokufanayo, unokufumana amaza ayi-180 okanye amaza angama-360 ajikelezayo macala onke. Ngamafu asezantsi aphelayo, isiphumo sokuhlala sihlala sisesisitayile esicocekileyo, esicocekileyo esimnyama amadoda amnyama aya kuthanda.
Ukuphela okuphezulu ngamaza
Ukuphela okuphezulu kwamaza yeyona nto inqabileyo kunye nokusika ukuzama ukusizama. Inkqubo ye- ukuphela okuphezulu iqala kufutshane nomphezulu wentloko kwaye icofe iinwele ngokukhawuleza ngokucheba okufutshane kakhulu.
Amadoda anokukhetha phakathi kwe-taper ephezulu kunye ne-bald fade ephezulu, emva koko bagqibe kwelokuba bafumane amaza ayi-180 okanye ama-360. I-Sexy kwaye igudile, yenye yezona ndawo zilungileyo zokucheba amaza okufumana!
I-Bald Fade ngamaza
I-bald fade enamaza iphakathi kweyona mfutshane yokucheba iinwele onokuzama ngazo. Ikwabizwa ngokuba yi ulusu luyaphela i-bald fade haircut ingaqala phezulu, phakathi, okanye ezantsi emacaleni nasemva. Umchebi wakho wezinwele uya kusebenzisa izixhobo ezisikiweyo zokuthambisa ulusu lwakho de lubonakale luchetyiwe kwaye lutsha.
Njengokubonakala okungafaniyo kakhulu, amadoda aneenwele ezimfutshane ezimnyama ziya kugxila kuyo yonke ingqalelo kumaza azo acocekileyo anzulu. Ekugqibeleni, awungekhe uhambe gwenxa ngamaza aphelileyo anempandla.
Taper iphela ngamaza
Inkqubo ye- ukuphela kwetaper kunye namaza yizinwele ezipholileyo ezimnyama zamadoda ezisebenza macala onke. Iinwele zetaper zinika ukuguquguquka okuphezulu kwesitayile, kwaye zinokulungiselela amaza ayi-180 kunye nama-360.
Nokuba uqala ukusikwa okuphezulu okanye okuphantsi, cela ulayini ukubumba imiphetho, yongeza uyilo lweenwele, okanye uchebe icala kwicala lakho, i-taper enamaza ombonakalo weklasikhi.
Iinwele ezingama-360 zeenwele
Ezona zinwele zilungileyo zingama-360 ziqala ngokusikwa kwe-buzz emfutshane ngaphezulu kwaye ekugqibeleni zenze iinqaba ezinzulu zijikeleze intloko. Ukufumana kunye nokugcina amaza angama-360 kufuna ukuba yingcuka, ukufaka ipomade okanye igrisi, kunye nokuxubha iinwele.
Kumadoda amnyama afuna ukufumana amaza angama-360, iinwele zifuna ubude beenwele ezifanelekileyo, isitayile, izixhobo kunye nomonde. Jonga ezi ndlela zipholileyo zokuphakamisa iinwele ezingama-360 ukukunika izimvo ngendlela yokunxiba olu hlobo lwefashoni.
Amaza anzulu angama-360
Amaza anzulu angama-360 anesitayile esihle, kodwa afuna ingqeqesho, ukubrasha rhoqo kunye nokubamba. Ukufumana amaza angama-360, kuya kufuneka unqumle iinwele zakho zimfutshane kwaye emva koko uvumele iinwele zakho zikhule zivele iiveki.
Ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kwekhrimu yomtshangatshangiso eyomeleleyo edityaniswe nebrashi elungileyo kuya kukunceda ufezekise ubume beenwele eziyimfuneko ukwenza amaza anzulu. Ukuqaqambisa amaza angama-360, sicebisa ukuba i-taper iphele emacaleni nasemva.
Amaza angama-360 aneCandelo
Xelela umchebi wakho ukuba ufuna indawo kunye namaza akho angama-360 ukulungiselela ukubonakala kwakho. I-taper iphela ngamaza kunye nenxalenye ngumxube wamadoda wokusika kwale mihla kunye neklasikhi. Abafana banokufumana amaza ngenxalenye ngokucheba umgca ngaphambili kwentloko okanye emacaleni, njengokuyilwa kweenwele. Isitayile kunye nebadass, usenokufuna nokukhulisa iindevu.
I-360 Waves haircut kunye noyilo
Amagagasi ane-haircut yoyilo yenye yeendlela zokongeza ubuhle kule iinwele zipholileyo. Kubaqalayo, uzakufuna ukuphela kwamacala nasemva. Emva, unokucela i-barber yakho ngalo naliphi na inani loyilo lweenwele. Ukuba ufuna ukujonga ngenkalipho, amaza angama-360 kunye noyilo luya kukwenza ume ngaphandle.
Iinwele eziyi-180 zeeNwele
Iinwele ezingama-180 zokucheba iinwele ziqala ngokufanayo njengamaza angama-360, kodwa kulula kakhulu ukuzifumana, isitayile kunye nokuzigcina. Uya kudinga iinwele zokuphela emacaleni; i-bald fade ephezulu kunokwenzeka ukuba lukhetho olufanelekileyo kuninzi lwamadoda.
ukubekwa kokuvumisa ngeenkwenkwezi
Endaweni yokwenza imijikelezo ejikeleze intloko, amaza ali-180 ajolise phezulu. Xoxa ngamaza angama-180 aphela kunye ne-barber yakho ukuze uhlolisise i-cut cut and styling yeenwele zakho.
Amaza ayi-180 ayaphela
La maza angama-180 aphelile ahamba phambili kwiminyaka yamuva. Izitshixo zokufumana amaza amnandi kukuxubha, ukuthambisa kunye nokuhlala ebusuku. Ukuba uthanda iinwele ezimfutshane kakhulu emacaleni nasemva ngokuchaseneyo nenwele zetaper zakudala ezinobude obuthile, amaza angama-180 angalungeleka kwizinwele zakho.
Amaza ali-180 ayiliwe
Inyani yile yokuba amaza e-180 ayile uyilo avumela ukusikwa kwakho ukuba kubhetyebhetye ngakumbi. Ngokuphela emacaleni, umchebi wakho uya kusebenzisa umgcini weenkcukacha ukuba achebe kwiminqweno yakho uyilo lweenwele . Ngelixa kungakhange kubonakale kufanelekile ukuba ziingcali zeshishini, amaza ali-180 aneenwele ayile kwaye ahamba kakuhle.
Amaza apholileyo eenwele
Zininzi iintlobo ezahlukeneyo zamaza ezinwele onokukhetha kuzo. Kwaye ngelixa ukuphela okuphungulwe nge-buzz ngaphezulu kuyeyona ndlela ilungileyo yokucheba iinwele ukuze ufumane amaza, kuya kufuneka usoloko ufumana isitayile esifanelekileyo kwiimfuno zakho.
Nokuba uyinkwenkwana, intombazana ekwishumi elivisayo okanye ulutsha olufunayo, intshebe, ukusika isiqingatha senyanga, okanye umgca, kubalulekile ukuphonononga zonke iindlela zokucheba iinwele. Fumanisa ezi ndlela ziphakamileyo zokuzilungisa iinwele ukuze ufumane ezona ndlela zilungileyo zokuthamba iinwele.
Ukucheba iinwele ngeendevu kunokuba yinto ebonakalayo yendoda. Ngapha koko, amaza kunye neendevu zakho ziya kudibana. Ngokucheba iinwele phakathi kokudala ukusikwa okuphezulu, abafazi bayakuthanda ukubonakala kwamadoda amnyama anokukhulisa iindevu. Gcina iinwele zakho zobuso zimfutshane, zilungisiwe kwaye zicocekile ngesinqe esihle, ishampu yentshebe neoyile.
Ukucheba iinwele ngamacandelo achetyiweyo kujongeka kulungile kuwo onke amadoda amnyama. Mhle kwaye ugudile, umchebi wakho wonqumla umgca kwiinwele zakho, nokuba kungamacala okanye ngaphambili. Isiphumo kukujonga okutsha okwahlukileyo okwahluka kwipateni yokutsala kunye nokubamba ingqalelo. Kubafana abathanda ubuqaqawuli obuthile, inxenye enamaza ali-180 okanye ama-360 yongeza umnxeba opholileyo.
Isiqingatha seNyanga sokucheba iinwele
Isiqingatha sokucheba kwenyanga siyinxalenye egobile efana negama layo. Umchebi wakho uya kucheba isiqingatha senyanga encotsheni yeenwele zakho, ngaphambili kwentloko yakho. Idityaniswe nefungu lokutshiza kunye nepateni enzulu, isiqingatha senyanga esisikiweyo sikhangeleka sigqibelele.
Amakhwenkwe aMnyama ngaMaza
Amakhwenkwe anamaza ajongeka emhle kwaye emhle njengamadoda. Zonke amakhwenkwe amnyama amnyama bangayikhupha le nwele ukuba baqala ngokusika ekunene kwaye bafumane uncedo kumzalwana wabo omdala okanye utata. Ngenxa yobume obuthambileyo beenwele zamakhwenkwe, amathuba okuba abantwana banokufumana amaza angama-180 kunye nama-360 ngokukhawuleza kunamadoda amadala.
Amaza ane Line Up
Inwele ezirhangqwayo ezinomgca ophakamileyo zinokuthatha iinwele zakho ukuya kwinqanaba elilandelayo. Ngokwenyani, asinakho ukucinga ngokuphela kwamaza ngaphandle komphetho phezulu. Xa usika, qiniseka ukuba umchebi wakho ubumba iinwele ezijikeleze iinwele zakho kunye neetempile ukwenza imigca ebukhali, ecekeceke egxininisa ipateni yakho yomtshangatshangiso. Inkangeleko yokugqibela iya kukwenza uzive uhlaziyekile kwaye ungumbonisi njengoko uphuma kwindawo yokucheba iinwele.
Ngezinto ezininzi ezipholileyo eziye zaphela kwaye iinwele zamadoda amnyama ukuzama, akukho sizathu sakudikwa kukusika kwakho. Jonga konke ukusika kweenwele ezimnyama ezahlukeneyo kunye nezitayile ukufumana inkangeleko yakho elandelayo.
iinwele zeenwele ezinde
iinwele zamadoda angaphezu kwama-60